အောက်တိုဘာလ 2021 – Android Cheats သိကောင်းစရာများ
Get new level and starting tips for the Android game you're looking for, သို့မဟုတ် Android အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏လူကြိုက်အများဆုံးဂိမ်းနှင့် cheat များကိုကြည့်ပါ. cheat များအတွက် Android ဂိမ်းဖြင့် Browse.
Monthly Archives: အောက်တိုဘာလ 2021
နေက ငါတို့အပေါ်မှာ ထွန်းလင်းနေတယ်။ – Visual Novel Cheats&Hack
ဆယ်ကျော်သက်များ၏ စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့် ဆက်ဆံရေးပြဿနာများကို လှည့်ပတ်နေသော စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်! "The Sun Shines Over Us" သည် အင်ဒိုနီးရှားအထက်တန်းကျောင်းတွင် ရွေးချယ်မှုများနှင့် အဆုံးသတ်များစွာပါရှိသော ထိထိမိမိ စာနာနားလည်နိုင်သော ဇာတ်ကြောင်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။. 🌻STORY🌻သင် Mentari အဖြစ်ကစားပါ။, ကျောင်းပြောင်းပြီး သူမရဲ့အတိတ်ဒဏ်ရာကနေ ပြန်ကောင်းလာဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ အနိုင်ကျင့်မှုရဲ့ သားကောင်. ထဲမှာ… ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): မင်္ဂလာပါ, Shines, ဆန်းတယ်, Visual
ဓားကစား! Ninja Slice Runner Cheats&Hack
သင့်ဓားကို ပွတ်ပေးပါ။, ဓားဆရာ! တကယ့် Shinobi စွန့်စားခန်းကို စတင်ဖို့ အချိန်တန်ပါပြီ။! Sword Play မှကြိုဆိုပါသည်။! - မင်းလုပ်ရမှာက dash ဖြစ်တဲ့ ပျော်စရာ arcade ဂိမ်းတစ်ခုပါ။, မျဉ်းစောင်း & လှီးပါ။! စိန်ခေါ်မှုအဆင့် ရာပေါင်းများစွာကို ကျော်ဖြတ်ပြီး သင့်အား ရပ်တန့်ဝံ့သော သင်၏ပစ်မှတ်အားလုံးကို အပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပါ။! နိုင်မလား… ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): မင်္ဂလာပါ, Ninja, ကစားသည်, Runner, Slice, ဓားရှည်
ဘိန်းကစားချိန်ဂိမ်း – လှိုင်သာယာ&Hack
Explore new places in poppy playtime horror and be somebody different to discover new ways to play with the poppy playtime horror အသိုင်းအဝိုင်း All this fun in poppy playtime horror game.in poppy playtime game you must stay alive in this horror/puzzle adventure.With so many things to discover inside poppy playtime, ဖြစ်နိုင်ခြေတွေက အဆုံးမရှိလုနီးပါး... ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): မင်္ဂလာပါ, ဂိမ်း, ကစားချိန်, Poppy
Redlight Survivor: ကျွန်းသေ – လှိုင်သာယာ&Hack
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အချမ်းသာဆုံးလူဖြစ်ချင်လား။? အိမ်ကြီးမှာ နိုးထပြီး မင်းရဲ့ကောင်မလေးကို ခေါ်ဖို့ ဖန်စီကားကို မောင်းချင်လား။?456ဘီလီယံသည် ၎င်း၏ ထိုက်တန်သော ပိုင်ရှင်ကို စောင့်နေသည်။. မင်းလိုချင်တယ်။? မင်းရဲ့တန်ဖိုးကို သက်သေပြပြီး သတ္တိရှိရှိ ကျော်ဖြတ်နိုင်ရမယ်... ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): မင်္ဂလာပါ, Dead, ကျွန်း, Redlight, Survivor
Trivia Deluxe – လှိုင်သာယာ&Hack
Trivia Crack ဖန်တီးသူများထံမှ, Trivia Deluxe လာပါပြီ။: ဇိမ်ကျကျနှင့် ပျော်စရာအပြည့်ရှိသော အသေးအဖွဲဂိမ်းအသစ်!သင့်စိတ်ကို ထက်မြက်လာစေရန် မေးခွန်းပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာဖြင့် ဤခမ်းနားသောအတွေ့အကြုံသစ်တွင် အဓိကကြယ်ပွင့်ဖြစ်ပါစေ။, သင်၏ အသိပညာကို စမ်းသပ်ပြီး လိုချင်သော စင်မြင့်ပေါ်သို့ တက်ပါ။. လူအုပ်ကြီးက သင့်ကို အထင်ကြီးစေလိမ့်မယ်။! ရောက်အောင်… ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): မင်္ဂလာပါ, Deluxe, Trivia
Kick The Buddy Remastered – လှိုင်သာယာ&Hack
Kick the Buddy Remastered မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။! တစ်နေ့တာလုံး စုပြုံနေသော ဒေါသများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် ကူညီပေးသည့် ဂိမ်းသည် မိုဘိုင်းလ်ဂိမ်းကို ကောင်းကျိုးအတွက် အသုံးပြုရန် နည်းလမ်းသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။!ကစားသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ပါ, စိတ်ဖိစီးမှုကို သက်သာစေရန် မြောက်များစွာသော လက်နက်မျိုးစုံကို ရွေးချယ်ပါ။! AK-47 ရယူပါ။, လက်ပစ်ဗုံးများ, ဓားများ သို့မဟုတ် ဘုရားရေးရာ တန်ခိုးများနှင့် ... ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): Buddy, မင်္ဂလာပါ, ကန်တယ်, Remastered
ဦး နှောက်ပဟေ.ိ – ဆန်းကျယ်သောစမ်းသပ်လှည့်ကွက်များ&Hack
Brain Puzzle မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ – လှည်စမ်း – ထိပ်တန်းပျော်စရာကောင်းသော တွေးခေါ်မှုနှင့် ဦးနှောက်ဂိမ်းများ! ဆန်းကျယ်ပြီး ရယ်စရာကောင်းတဲ့ ပဟေဠိများစွာက သင့်ကို စောင့်ကြိုနေပါတယ်။. သင့်စိတ်ကို ပေါက်ကွဲစေပြီး ဘုံဘောင်များမှ လွတ်မြောက်စေနိုင်သော ရယ်စရာကောင်းသောကမ္ဘာထဲသို့ သင်ဝင်ရောက်လာပါပြီ။! Brain Up ဖြင့် သင့်ဦးနှောက်ကို စမ်းသပ်ကြပါစို့! 👌 🧠 Squid Challenge, ခက်ခဲသောစမ်းသပ်မှုမှာ… ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): ဦး နှောက်, မင်္ဂလာပါ, ပဟေ.ိ, Test, လှည်
Antia ၏ခေါ်ဆိုမှု: မီးခြစ်3RPG လှည့်စားမှုများ&Hack
Call of Antia သည် match-3 RPG ဂိမ်းအမျိုးအစားအသစ်ဖြစ်သည်။. ဤထူးခြားသော RPG ဂိမ်းတွင်, ဂန္ထဝင် match-3 ပဟေဠိကစားနည်းသည် တိုက်ပွဲနှင့် ရောနှောထားသည်။, မှော်, ရန်သူတို့၌ မကြောက်မလန့်ဘဲ နဂါးတို့ကို၎င်း၊. အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား? Antia ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုထုတ်ဖော်ရန်အချိန်ရောက်ပြီ။! · သည်းထိတ်ရင်ဖိုစရာ Match-3 ဂိမ်းကစားခြင်း အားကောင်းပြီး ဗျူဟာမြောက်တိုက်ပွဲများ. ခရီးတစ်ခု… ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): Antia, ခေါ်ပါ, မင်္ဂလာပါ, မီးခြစ်, RPG
Jackal အဖွဲ့ – Arcade သေနတ်ပစ်ဂိမ်းများ&Hack
ဒဏ္ဍာရီလာ jackal jeep ဂိမ်းဖြင့် သင့်ငယ်ဘဝသို့ ပြန်သွားပါ။ 1988 . Jackal အဖွဲ့ – ထိပ်တန်း သေနတ်သမား – Arcade Shooting သည် သင့်ဖုန်းသို့ ဂန္ထဝင်ဆန်သော အငွေ့အသက်ကို ယူဆောင်လာနိုင်သည့် သေနတ်ပုံစံ သေနတ်ပုံစံ ပစ်ခတ်မှုပုံစံ ဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။. 👉 ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီး ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။, ဖက်ဆစ်တွေက မဟာမိတ်တွေကို တိုက်ခိုက်တယ်။. ရန်သူ့နောက်ကွယ်မှ ဓားစာခံများ ဖြစ်ကြသော မင်းရဲ့ ညီအစ်ကိုများ... ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): Arcade, မင်္ဂလာပါ, Jackal, ပစ်ခတ်မှု, Squad
Dalgona သကြားလုံး Honeycomb ကွတ်ကီး – လှိုင်သာယာ&Hack
Dalgona Candy Honeycomb Cookie Game မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။. ဤသည် dalgona သကြားလုံးပျားလပို့ရှိကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများအကြောင်းဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။. သကြားလုံးပုံသဏ္ဍာန်များကို ဖြတ်ပြီး ပျော်ရွှင်လိုက်ပါ။. စိန်ခေါ်မှုက ဒီလောက်မလွယ်ပါဘူး။. ကွတ်ကီးပုံသဏ္ဍာန်ကို ထိန်းသိမ်းထားရန် သတိထားရန် လိုအပ်သည်။. Dalgona Candy Honeycomb Cookie Game သည် လူကြိုက်များသော ဂိမ်းအသစ်ဖြစ်သည်... ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): သကြားလုံး, မင်္ဂလာပါ, ကွတ်ကီး, ဒယ်လ်ဂိုနာ, Honeycomb
Transformation 3D – လှိုင်သာယာ&Hack
Angry Birds Journey – လှိုင်သာယာ&Hack
Gunshot Run – Action Shooter Cheats&Hack
Bankrupt Demon King – လှိုင်သာယာ&Hack
Huggy Escape ကစားချိန် – လှိုင်သာယာ&Hack
Box Simulator – လှိုင်သာယာ&Hack
ချစ်စရာကောင်းသော အမြီးများ: Otome ဂိမ်း – လှိုင်သာယာ&Hack
စာလုံးပေါင်းကိုလှည့်ပါ။ – လှိုင်သာယာ&Hack
456 Imposter Survival ဂိမ်း – လှိုင်သာယာ&Hack
Te Reo Māori/mi/2021/10/
gagana fa'a Samoa/sm/2021/10/
© MobileCheats.Edu.pl. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး.